बन्दुकको बलमा बर्बरता - अपराध - साप्ताहिक
अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसकै दिन नेपालगन्जमा न्याय र अधिकारको माग गर्दै ठूलो र्‍याली निस्किएको थियो । र्‍यालीमा कानुनको पालना र जनताको सुरक्षाको जिम्मा पाएका प्रहरी प्रशासनका प्रमुखदेखि महिला नेतृहरू सहभागी थिए ।
गणेशमान चोकबाट ३ किलोमिटर दक्षिण जयसपुरसम्म पुगेको र्‍याली सभामा परिणत भएसँगै अधिकार र न्यायका चर्का भाषण भए, तर सभामा कुनै हिंसापीडितले पीडा पोख्ने अवसर पाएनन् । दुव्र्यवहार, कुटपिट एवं चरम यातनाका साथ घरबाट लखेटिएका कैयौं महिला त्यति बेला न्यायका लागि हारगुहार गर्दै थिए । त्यस्तै पीडितहरूमध्ये ज्यानमार्ने धम्कीसहित घरबाट लखेटिएकी राप्ती सोनारीकी गाउँपालिका, बाँकेकी गीता वली आफ्नो पीडा व्यक्त गर्न र्‍यालीमा सहभागी भएकी थिइन् । काखमा सानो छोरो च्यापेकी गीता बोल्ने मौका नपाएपछि सभास्थल छेउमा रुँदै थिइन्, तर उनको पीडा बुझ्ने र आँसु देख्ने कमै थिए ।
सशस्त्र प्रहरी बल म्याङलुङ गणका गणपति डिएसपी देवबहादुर बोहोराकी पत्नी गीता न्याय र अधिकार माग्दामाग्दा थाकिसकेकी छिन् । जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाएका डिएसपीले ज्यान मार्ने धम्कीसहित चरम दुव्र्यवहार गर्दै घरबाट लखेटेको आरोपका साथ गीता अहिले साथी नामक संस्थाको आश्रयमा पुगेकी छिन् ।
कसरी न्याय पाउने मैले ? मन्त्रीदेखि विभागको प्रमुखसम्म सबै उसकै पक्ष लिन्छन्, –गीताले सभास्थलमा रुँदै भनिन् । सशस्त्र प्रहरी बलको हेडक्वाटरस्थित महिला सेलसमेत पीडकको पक्षमा देखिएको एक प्रहरी अधिकृतले बताए । बोहोराले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई समेत प्रभावित तुल्याएको बताइन्छ ।
बोहोराको अत्याचार र दुव्र्यवहारले सीमा नाघेपछि गृह मन्त्रालयले साउन ८ गते सशस्त्र प्रहरी बलको प्रधान कार्यालय तथा प्रहरी प्रधान कार्यालय दुवै निकायलाई आवश्यक कारबाही गर्नु भन्दै लिखित निर्देशन दिएको थियो, तर गृह मन्त्रालयको आदेश कार्यान्वयन नभएपछि गीता बिचल्लीमा परेकी त छिन् नै, डीएसपी बोहराका सामु ती निकायका प्रमुखहरूसमेत निरीह देखिएका छन् । बन्दुकको बलमा हुँदै आएको बर्बरता कसले नियन्त्रण गर्ने ? महिलाहरू प्रश्न गर्न थालेका छन् । न्याय दिने निकाय नै पीडकहरूको पक्ष लाग्दा धेरै महिला न्यायबाट वन्चित हुँदै आएको पीडितहरूको गुनासो छ ।
घरेलु हिंसा गर्दै आएका डिएसपीले आफू सुडान गएका बेला पठाएको पैसा गीताले हिनामिना गरेको आरोप लगाएका छन्, तर सुडान जाँदा बोहोराले पदको दुरुपयोग गरेको आरोप अर्कातिर छ । बोहराले चार महिनाको अन्तरमा दुईवटा पासपोर्ट लिएका छन् । २०१२ वैशाख १७ गते आधिकारिक पासपोर्टका लागि पेस गरेको फारममा निकटतम व्यक्तिका रूपमा बहिनी कमला ऐरीको नाम उल्लेख छ भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेबाट २०१२ भदौ २७ गते लिएको अर्को साधारण पासपोर्टमा निकटतम व्यक्तिका रूपमा पत्नी कमला बोहोराको नाम उल्लेख छ । पासपोर्टअनुसार बोहोराकी पत्नी र बहिनीको नाम एउटै भए पनि नाता र थर फरक–फरक छन् । एउटा जिम्मेवार प्रहरी अधिकृतले दुई थरी विवरण पेस गरी दोहोरो पासपोर्ट लिएको पुष्टि हुँदासमेतसरकारी निकाय मौन छन् । झूटो विवरणसँगै नाम थर वतन ढाटेर पासपोर्ट लिनु कानुनत: अपराध हो ।